Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah, xanuusanayso ama dhaawac tahay | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / In laga shaqeeyo Iswiidhan / Haddii aad leedahay hoos u dhaca awooda laxaadka ah, xanuusanayso ama dhaawac tahay
Taageero si looga qayb qaato hawlaha Xafiiska Shaqada
Haddii aad raadinayso shaqo waxaa muhiim ah inaad ka qayb-qaadato hawlaha aad shaqo ku helayso. Haddii aad Xafiiska Shaqada u sheegtay inaad leedahay hoos u dhac awoodaada ah markaasi hawlahan waxaa lagu haboonaysiin karaa awoodaada. Waxaa Xafiiska Shaqadu ay xitaa ku siin karaan fursado taageero gaar ah dhanka suuqa shaqada.
Dheeraad ka akhri bogga intarnatka ee Xafiiska Shaqada.
Xafiiska Shaqada ayaa si wada-jir ah adiga kuula eegaya nooca taageero ama ku haboonaysiinta aad u baahantahay. Xafiiska Shaqada waxaa ka shaqeeya dad aqoon u leh hoos u dhacyada awooda ee kala duwan iyo noocyada kala duwan ee taageero ee jira. Si wada-jir ah ayay adiga kuula qorshaynayaan sida aad uga qayb qaadan karto hawlo ku haboon awoodaada.
Dheeraad ku saabsan kaalmada iyo taageerada ka akhri bogga Qasnada Caymiska. Warbixintan waxay ku qorantahay iswiidhish oo keliya. Guud mar ku samee hagida Qasnada Caymiska ee loogu talogalay adigaaga leh hoos u dhac awooda ah. Hagidan waxay ku qorantahay iswiidhish oo keliya.